छाला « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
असार महिना बित्यो श्रावण भयो सुरु ।लगाइ धान बालि अब आउला लुतो बरु ।। मनाउथे हेर हाम्रा पुर्बले सक्रान्ति लुते ।मासि गयो परम्परा कृषक नै हेर सुते ।। थाकित हुन्थे
होली खेल्दै हुनुहुन्छ ? हाेसियार! भुलेर पनि नगर्नुस् यी काम
जनस्वास्थ्य सरकोर, काठमाडौं । होलीमा मानिसहरूले एक अर्कामाथि विभिन्न प्रकारका रङ्गहरू दलेर रंगिन बन्छन्। रङ लगाएर एक अर्कामा अत्मीयता साटासाट गरिने यस पर्वमा हिजोआज हाम्रो शरीरलाई असर पार्ने घातक रसायन
फ्याट ग्राफ्टिङ र पि.आर.पी. थेरापी
फ्याट ग्राफ्टिङलाई सामान्य भाषामा बोसो प्रत्यारोपण भन्ने बुझिन्छ । यस प्रक्रियामा आफ्नो शरीरको बोसो निकालेर प्रशोधन गरी आफ्नै शरीरका आवश्यक परेका अन्य भागहरुमा फ्याट ग्राफ्टिङ गरिन्छ । यो सौन्दर्य सम्बन्धि
छालामा बोटक्स उपचार
वोटक्स उपचारको प्रयोग आजकल निकै लोकप्रीय भएको छ । पाँच वर्षअघि अलि उमेर भएका व्यक्तिहरु बोटक्स उपचार गर्न आउने गरेकोमा अहिले २५ देखि ३० वर्षका महिला पुरुष दुवै अत्यधिक यो
एलर्जी वातावरणमा भएका केहि कुराहरूसँग मानिसको प्रतिरक्षा प्रणाली धेरै नै संवेदनशील भएर देखिने समस्या हो । यो विभिन्न कारणले हुनसक्छ । खानेकुरा, धुवाँधुलो, फङ्गस, कोलन्ज, भित्री संक्रमण, किराफट्याङ्ग्राले टोक्दा एलर्जन्सहरु
के हो सोरायसिस ?
नेपालको सन्दर्भमा सोरायसिसका बिरामीहरुको एकिन तथ्याङ्ग छैन । तर ओपिडीमा उपचारका लागि आउने बिरामीहरुको संख्या धेरै छ । ओपिडीमा आउनेमध्ये २—५% सोराइसिसका बिरामी भेटिन्छन् । सोरायसिस समस्यामा कोषहरू द्रुत रूपमा
कपाल झर्ने समस्या : रोकथाम र उपचार
कपाल झर्ने समस्या पुरुष, महिला, बालबालिका र बृद्धा सबैलाई हुनसक्छ । डिफ्युज हेयर लस कपाल पातलो हुँदै जाने समस्या हो । ठाउँ ठाउँमा कपाल चक्का भएर झर्ने समस्यालाई एलोपेसिया एरियटा
धेरैलाई सताउने ‘डण्डिफोर’
डण्डिफोर प्रायः अनुहारलगायत शरीरका अन्य भागमा पनि आउने र यसले अनुहारको रौनक नै बिगार्ने भएकाले हामीलाई डण्डिफोर आएको मन पर्दैन । अझ कतिपय डण्डिफोरले त दाग नै बस्छ । डन्डीफोर
के हो दाद ? प्रकार, कारण, उपचार र रोकथामका उपायहरु
सामान्य भाषामा दाद छालामा लाग्ने एक प्रकारको ढुसी हो । मेडिकल भाषामा यसलाई फंगस टिनिया इन्फेक्सन भनिन्छ । पाउरोटी र अचार जस्तै छालामा पनि ढुसी पर्नसक्छ । ढुसी विभिन्न किसिमका
पोतो र डण्डिफोरमा लेजर प्रविधि
कस्ता कस्ता समस्या भएका बिरामीहरु आउँछन् ? कस्मेटिक क्लिनिक भएकाले यहाँ छाला सम्बन्धी रोग भन्दा पनि कस्मेटिक समस्याहरु भएका मानिसहरु धेरै आउँछन् । विशेषगरी चाँयापोतो, डन्डीफोर, अनावश्यक रौँ, आँखा वरिपरिका
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमावापतको रकम उपलब्ध नगराउँदा मध्यपुरथिमि नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल कोरिया